အဲ့ချိန်က အချစ်နဲ့ ရင်ခုန်မှုက နောက်ဘယ်တော့မှ ပြန်မရတော့ဘူးကွဲ့။
ပါပီ လပ်(ဗ) ရယ်။
သင်္ချာသင်ခန်းစာမှာ ဘေ့(စ) တူမှ ပါဝါခြင်းပေါင်း လို့ စိုင်း ဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်း…….
“””အချစ် သာ စစ်မှန်လို့ကတော့ ၊
ဘယ်လို အခက်အခဲ ခယောင်းလမ်းမဆို ၊
ခု အလှမ်းဝေးတဲ့ အချစ် အတွက်တော့ ကံကောင်းပါစေ လို့သာ။
မ ခိုင်ဇာ ကို ပြောခဲ့ / အားပေးခဲ့တဲ့ ၊
စကားလေးကိုပဲ ပြန်ပြောပါရစေ ။
” ( နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ရဲ့ ) အချစ် သာ စစ်မှန်လို့ကတော့ ၊
ဘယ်လို အခက်အခဲ ခယောင်းလမ်း မဆို ၊
” ချစ်ရသူလေးရဲ့ ဖခင်ကြီးက “ မီးမြင့် ”နေမှန်း အခုမှသိရတာမို့ ”
” မီး ” ဆိုတာကလည်း အမြဲတမ်း ” မြင့် ” နေတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။
ကိုယ်တွေကလည်း ၊ စာရိတ္တပျက်နေ ၊ လမ်းဘေးရောက်နေ သူတွေမှ မဟုတ်တာ ။
နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ရဲ့ အချစ် သာ စစ်မှန် / ရေရှည်ခံ / ခိုင်မြဲ လို့ကတော့ ၊
အချိန်တန်ရင် ၊ ချစ်ရသူလေးရဲ့ ဖခင်ကြီးက လက်ခံလာမှာပါ ။
ဒီကြားထဲမှာ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် စလုံးက သစ္စာ မပျက်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ ။
သူမ ကိုလည်း ပြောပြပေါ့ဗျာ ။
ကိုယ်တစ်ကယ် ချစ်နှစ်သက်သူ နှင့် ပေါင်းရတာဟာ ၊
ဘယ်လောက် ချိုမြိန်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ။
မယုံရင် ၊ ရှေ့က မန့်သွားတဲ့ ၊ မ ခိုင်ဇာ ကိုပါ မေးကြည့်ပါလား ။
သူ ” တစ်စုံတစ်ယောက် ” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကို ရေးပြီးတိုင်း ရေးပြီးတိုင်း ၊
ဘယ်လောက် ကြည်နူး ရတယ်ဆိုတာ ။
အင် ၊ အဘ လည်း ရေးရင်း ၊ ရေးရင်း နှင့် အရမ်း နု သွားပြီး ။
( ကိုယ့် သက်ကြားအို အရွယ်ကြီးမှ အားမနာ )
Personal တွေပါသွားရင် ၊ ခွင့်လွှတ်ပါ မ ခိုင်ဇာ ရေ ။
အဲဒီ ခံစားချက်က အဟုတ်ပဲလို့။
ဘဖောတို့ သိပ် သိချက်ကတော့။
ဒါကို တစ်စုံတစ်ယောက် မြင်နိုင်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
ဇာဂျီး နဲ့ အဘဖောရေ
“အချစ်ရဲ့အစ ဘဝက လူရည်မလည်… ရိုးသားတဲ့ အသက်အရွယ်…”
တကယ်ပါဗျာ… အရွယ်နဲ့ မမျှအောင် ခံစားခဲ့ရတာပါ…
နှစ်တွေကြာခဲ့ပေမယ့်… ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးဗျာ…
ခုလည်း ဘာမှမဆိုင်… ကျွန်တော်လည်းဘာမှ လုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စ…
သံယောဇဉ်ကြိုး ရစ်ပတ်တိုးခဲ့ပြိမို့သူ့ကိုတော့ အရမ်းသနားတာပဲ၊ ပြီးတော့…
အကောင်းဘက်က စဉ်းစားပါ ဦးကျောက်ရယ်။
“” တကယ်တမ်းတော့ ပျော်ရွှင်မှုမှာ နှစ်ဦးအသားကျနေရင်
(ခရက်ဒစ်တူ ကိုဂျီး မတ်)
ဆိုတော့ ဘဝမှာ နှလုံးသားခံစားချက်ခြင်းအရမ်းနီးတဲ့သူရှိနေရင် ကျန်တာသိပ်မလိုအပ် လို့ ကျုပ်တော့ ထင်တာပါပဲတော်။
ချစ်နေခြင်းဆိုတဲ့ သစ္စာလေး မပျက်သေးရင်.
ဘ၀က ဖြေသာမယ်ထင့် :harr:
အဆိုးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ကြို ပြင်ရတာပေါ့…
နိမိတ်မရှိ နမာမရှိ… ဖွဟဲ့..
မနေ့က သင်ခန်းစာ ဒီနေ့ ချက်ချင်း အပလိုင်းလုပ်နိုင်တယ်ရယ်။
ဒီ အသုံးကို ကြိုက်သဟဲ့။
ဆရာ့ထက် တပည့် တစ်လ ပိုကြီးတာတော့ မဖြစ်ချေဘူး။
တော်ကြာ ဒေါ်ဆွိ ဆီမှာ..
အူးကျောက်ကြီးပါ လာတပည့်ခံနေမှ. အခက်.
သူက ပြေးပေါက်မှားဖို့ သေချာပီးသားလူကြီး
မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရက် အဲ့လို မထှာ :harr:
အောင်မာ .. အောင်မာ …
မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရက် အဲ့လို မထှာ .. ဆိုဘဲ …
ဒီလူဂျီး မှန်မကျိဘူး ထင်ဒယ် …
ကျုပ် ဥလေးကျောက် ကို ဂလို လာမပေါဘာနဲ့ …
ကျုပ် ဥလေးထိ ဒါးကျိဘဲ … ငွင်းး ငွင်းး …
ငွေရတုကျော်ခဲ့ပြီမို့… puppy love မဟုတ်မှန်း ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဗျာ…
Paul Anka ရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးကို ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…
ရေးလိုက်တာနဲ့  ဆုတွေရထားတဲ့သူကြီးရေ ဆက်ရေးပါအုံး မရပ်ပါနဲ့အုံးဗျို့။
အသည်းမကွဲသေးရင်တော့ ရေးဖြစ်ဦးမှာပါ အကိုပေါက်ရေ…
ဒါပေမယ် ဟိုဇာတ်ဝင်ခန်းကိုတော့ ယုံဘူးဗျာ။
ဘယ်နှဲ့ သဘာဝ မကျလိုက်တာအေ့
ဒါပေမယ့် “သူမ” အမေလည်း အကိုပေါက်လိုပဲ မယုံဘူးတဲ့…
“ရှင်းပြရခက်တယ်” ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လို ဖြစ်နေပြီ…
ဒီတစ်ခါ ဖူးစာရေးနတ်မင်းကို လက်တည့်အောင် ဆုတောင်းပေးပါဗျာ…
“မေတ္တာဖြင့် လက်ဖွဲ့ချင်းသီးခံပါ” လို့…
အွန်းးးးးဝမ်းနည်းစရာ အူးကျောက်ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေး…
အငိုနဲ့ ဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မို့ပါ…
♫♪♫ ..အတွေးလေးထဲ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ဒီဆေးပျက်ပန်းချီကားလေးဟာ
အသစ်ဖြစ်ခဲ့ ..အရောင်တွေလင်းပြီးတော့လက်လာ ..ငါမရခဲ့တဲ့ အတိတ်ရဲ့
နှလုံးသားပန်းချီ ဇွတ်ရင်ကိုဝင်လာ ..ကြေကွဲအောင် ထားခဲ့သလား … ♫♪♫
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အချစ်က တိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလို…”
ဦးကျောက်ခဲလို အဖိုးတန် မျိုးမှန် ဂျိုးသန်ကို လက်မခံတဲ့ လူဂျီးတွေ ရှိသေးသတဲ့လား…. တောက်စ်…. လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ အမာခံတွေကွ၊ မရလဲ ကိစ္စမရှိဘူး (ဟီဟိ သူမရမှ ငါဆက်ကြံလို့ရမှာ) ကောင်မလေးကို ရာဇသံပေးလိုက်ဗျာ… နင်ငါ့ကို မယူရင် ကြောင်ကြီးကို ယူရမယ်လို့…။ တောက်စ်… မစားဘူး မျိုချပစ်မယ်…
ဟာ …ဦးကြောင်တို့ ကတော့ဘယ်ကတည်းကချောင်းနေလည်းမသိဘူး
လူ့ ဘောင်သစ်ဆိုတာကြီး မေ့ ထားပါဗျာ
ယောက္ခမဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက ချာတိတ်ပါပဲ
ကိုယ်ချင်းစာပါဗျ လို့ ပြောလိုက်
သေရင်ကိုယ့် နောက်ဘာမှမပါဘူး အကုန်ထားခဲ့ ရတာ လို့ 
ဒီတော့ပေးစရာရှိတာ လတ်ဆပ်တုန်းပေး ။ ဒါမှကုသိုလ်ရတာ လို့ 
” အဖိုးတန် မျိုးမှန် ဂျိုးသန် ”
အဖိုးတန် မျိုးမှန် အထိက ဟုတ်ပါသေးတယ် ။
နောက်ကဟာကြီးက ဘယ်လိုတုန်း ။
ဆိုတော့ကာ… ဘယ်ရမလဲ… ကျုပ်ဟာကျုပ် ရအောင်ယူမှာပေါ့ဗျ…
ဟေ့လူ… အဘ မေးနေတယ်၊ ခင်ဗျားဘယ်လိုသိလဲတဲ့…
ပွဲမကြမ်းရဲဘူး… မတော် ဘိုးတော်ကြီးက ကောင်မလေးကို အတင်းအိမ်ထောင်ချပေးလိုက်မှ…
ဟဟား… ဖျာခင်းရုံတင်မက၀ူး ခေါင်းအုံးတွေ စောင်တွေ
ခြင်ထောင်တွေပါ တစ်ခါတည်း ပြင်ပလိုက်တာ အေးရော…
ကိုကြီးကျောက်ရယ်… အဟင့် ……. အဟင့် …… အဟင့် …… လို့ ဘဲ မန့်တော့မယ်ဗျာ။
အရေးကောင်းလွန်း လွန် လွန့် လို့ ပါ။
ဆရာခရယ်… အချွန်နဲ့ မ မပါနဲ့ဗျာ အဟင့် ……. အဟင့် …… အဟင့် …… လို့ ဘဲ
ဦးကျောက် အမြန်စွံရန် ယတြာပေးလိုက်မယ်။
ရှေ့ကားပိတ်နေလို့ ဖြစ်မယ်။ ရှေ့ကားမြန်မြန်ထွက်အောင်လုပ်လိုက်။
ကုန်းတက်ကြီးမှာ နောက်ပြန်မလိမ့်အောင် ထိန်းနေရတာ ခင်ဗျ…
အစ်မအစ်ပျိုကြီး ရှိတယ်ဆို (အာဝေနိကမှာ ဖတ်ထားတာ)
အားမငယ်ပါနဲ့ အူးကျောက်ရယ်.. ငယ်ချစ်ဟောင်းကို ရအောင် ပြန်ပိုးပေါ့လို့…
ဟမ်မလေး မိရွှေ Wow ရဲ့
ငယ်ချစ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းကို ညည်းမသိသေးလို့ပါ…
ဟမ်… တူညားနဲ့ရတွားဘီလား… :bar:
သားလေး မွေးရင် ကျောက်နာမယ်ပေးဘာာာာာ
ပေးထားတယ်လေ .. တိဝူးယားးးးးးးးးးး … ကျောက်ပေါက်တဲ့ …. ခွစ်ခွစ်ခွစ်
အဲ့လူဂျီးကလေ နယ်ချစ်ဟောင်းဂို တံယောဇဉ်မကုန်တေးယို့ .. တွားပိုးတေးတယ် တိယား … ဟိုက နဂါးညက်စောင်းကျွေးလိုက်မှ ပျံလာဒါ …
(တစုံတယောက် ဖတ်မိပါစေတော် … ခိခိ :harr: )
ဦးကျောက်ခဲ ရဲ့ အသည်း မကွဲ တကွဲ ဇာတ်လမ်းလေး အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းသတော်..
ဦးကျောက် ကလဲ စစ်မရောက်ခင် မြှား မကုန်နဲ့အုံးလေ..
ဖခင်ကြီးက မီးမြင့်နေပေမင့် ကာယကံရှင် သူမလေးက အဓိက မို့လားလို့..
ရေကုန် ရေခမ်း ကြိုးစားပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ….
တူမ Mon Kit ရေ
ဦးလေးမှာက မြှားပဲရှိတာ… ဟိုကစက်သေနပ်ကြီးနဲ့…
ဟယ်.. ဒါဆို ဦးကျောက် တစ်ယောက် ချစ်မိနေတာ သဂျီးရဲ့ သမော်ဒီး. သမီးဒေါ်ဂလေးများလားကွယ်…
ဦးကျောက်ခဲရဲ့ ချစ်ပုံပြင် မှာ
မင်းသား၊မင်းသမီး ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းဆိုတဲ့
ကျေးဇူးပါဗျာ… မင်းသားကြီးနဲ့ မင်းသမီးလေးပေါင်းဖက်ရရင်တော့…
အေးပါ မာကလာဆောင်ရင် လက်ဖွဲ့ချင်းသည်းခံပါ ရေးရင်ရေး မရေးလို့ကတော့
ဦးလေး ဥကျောက်ဂျီးရယ်ဂ ….
ဒဏ်ရာ အဟောင်းတွေကို လှစ်ဟာပြ … ချစ်ခဲ့တာ ဒီလိုကွ …
ကံကြမ္မာ မိုးမှောင်ကျ … ဆိုးခဲ့တာလည်း ဒီလိုကွ …
လောကကြီးကို အရွှဲ့တိုက်ရင်း ကြက်တိုက်၊ ဖဲရိုက်၊ ဘိန်းရှူ (အကျင့် မပျောက်လို့ ခွေးလွှတ်ဘာ )
ရင်မှာ သိမ်းထားခဲ့တာ သူမ … နှလုံးသားရဲ့ တစ်ထောင့်တစ်ကဏ္ဍ …
ခု ဟန်ပဟ လို့ ဝမ်းသာရကာမှ …..
ဒက်ဒီ ဖားတား ဝါးတားတား ကြီးနဲ့ တွေ့လာရ …
ငါကွ လို့ အားခဲခဲ့သမျှ ခုများဖြင့် ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ …. အာဟ .. အာဟ …
ငါ ပျောက်သွားပါက … ကြောင်ကြီး ကောက်ကာ စားဖို့ပြင်နေဒါမို့ ….
အရင်ဆုံး ဘာမှ မလုပ်နဲ့လို့ တူတော်မောင် ငအံစာ က အကျံဒွေ ပေးကာလာ …
ကြောင်ကြီး ကို အရင် ရှင်းပလိုက်ဂျာ ….
ပီးဒေါ့ … ချစ်ကံခေလေ သမျှ ယတြာ ချေတဲ့ အနေနဲ့ တူတော်မောင် ကို x x x x x အအူ အအူ …
ဘိုအံရဲ့ ဟစ်ဟော့က လန်ထွက်နေတာပဲ…မိုက်တယ်ဗျာ…
ကြောင်ကြီးရန် အပြတ်ရှင်းဖို့အထိပါတော့ ခိုက်သွားပြီ…
ဟီး ဟီး… ကျုပ်လည်း အဆင်ပြေ…
ခီညားလည်း ပြေပါစေ… x x x x x အအူ အအူ …
ဦးကျောက်ရဲ့ ငယ်ချစ်အကြောင်းကို ဖတ်ပြီး
မနို… မျက်ရည် ဘူးသီးလုံးလောက်ကျလို့…
မနို…လူဇိုး… အခုမှအောက်က စာတန်းကိုဖတ်လို့ရတယ်
သြော် ဦးကျောက် ဦးကျောက်
ပြတ်နေတဲ့ ကွင်းဆက် သေးသေးလေး အခုမှ ဆက်မိသွားတယ်
နောက်ထပ် ကွင်းဆက် သေးသေးလေးတွေ ရှိဦးမယ်ထင်တယ်။
အငိုနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုပေမင့်
ဦးကျောက်ကို မျက်ရည်သုတ်ပေးမယ့်သူ ရှိပါလိမ့်ဦးမယ်
ဒီဘွမှာ မျက်ရည်သုတ်ပေးမယ့်သူ ပေါ်မလာရင်
ဦးမာဃ တစ်ဖက်ငါးရာ စွန့်ကျဲလို့ ပြုစုပါမယ်ဗျို့
ဒီဘွမှာ မျက်ရည်သုတ်ပေးမယ့် ချစ်သူလေးကို လက်ဝယ်မပိုင်ရရင်တော့…
နတ်သမီး ငါးရာမလိုဘူး…. သူ့တစ်ယောက်တည်းပါ
အိုက်ဒါဆိုလဲ သူ့တစ်ယောက်ကိုပဲ အသေအချာ နတ်ပြည်ကိုခေါ်ပေးပါမယ်
သကြားမင်းကတော့ အချွန်နဲ့ မ နေပြီ။
သဂျားမင်းရဲ့ ဘော်ဘော်လို့ ပြောပြီး နတ်ပြည်ကို ဘ၀မကူးပဲတက်လို့ ရတယ်ထင်တယ်။ :harr:
အဲလိုမရပဲ ခေါ်နေလို့ကတော့ သကြားကို ရေလုံပြုတ်သောက်ပစ်လိုက် ဗိုကျောက် ရေ။
သကြားမင်း… ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် မလုပ်နဲ့နော်…
သူ့တစ်ယောက်ကိုပဲ ကွက် ခေါ်ရင်တော့…
ကော်ဖီမှုန့် နဲ့ရောပြီး ဘလက်ကော်ဖီ ဖျော်သောက်ပလိုက်မယ်…
ဘာမှတ်လဲ… ဦးကျောက် တဲ့…
ငါးရာစီ ပေးတာလဲ မယူ
ငယ်ချစ်တွေနဲ့ မပေါင်းခဲ့ရတဲ့သူတွေ သတိထားဖို့တော့လိုတယ်ဗျို့..
အိမ်ကမိန်းမနံမယ်မေ့ပြီး ရည်းစားဟောင်းတွေရဲ့နံမယ် မှားခေါ်မှာစိုးရတယ်…
ဒီလိုမမှားအောင် ဦးကျောက် မိန်းမ မယူနဲ့တော့ဗျို့…
ဟီး ဟီး… မောင်ကျောက်မှာ မှားလောက်စရာ အများကြီးမရှိပါဘူးဗျာ…
ဆေးပေးမီးယူ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် မီးခလုပ် မစမ်းပါရစေနဲ့…
မော်ဒယ်ဟောင်းသွားရင် ပြန်ရောင်းပြီး အသစ်လဲလို့ မလွယ်ဘူးနော်..
ရောင်းမရလို့ အလိုက်ပေးလဲမယ်ဆိုလဲ မလွယ်လှဘူး
ဘယ်သူမှ စလစ် မရနိုင်တဲ့ အရည်ကြိုကားကို ယူမှာမဟုတ်ဘူးနော်…..
ပြောရရင် Taxi သာငှားစီးပါဗျာ..။မြို့ထဲ ကားရပ်စရာနေရာလည်း စိတ်မပူရဘူး..။
ကားဟောင်းကြီးမို့ ခဏခဏ ရေဆေးစရာလည်းမလိုဘူးလေ….ဟားဟား..။
ဇတ်လမ်း အသစ်စက်စက်အတွက်တော့ အားမလျှော့ပါနဲ့ဗျာ…
ကိုကြောင်ဂျီးပြောသလို…ဦးကျောက်ခဲလို အဖိုးတန် မျိုးမှန် ဂျိုးသန်ကို လက်မခံတဲ့
“မီးမြင့်”တဲ့ ယောက္ခမ မျိုး ရှိသေးတာအံ့သြပါရဲ့… :buu:
အဓိကကတော့ အသက် နဲ့တူတယ်…
“ယောက်ကျားပဇင်း မိန်းမ ပုခက်တွင်း” ဆို ရှိသမို့လား…:kwi:
ကျုပ်က နှုတ်စီးတယ်နော… :hee:
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်ကျော်က ငယ်ချစ်ဦးဇာတ်လမ်းကတော့…
“ကုသိုလ်ကြမ္မာ မမှီပါခဲ့” လို့ ဖြေသိမ့် လိုက်ရပေမယ့်…
အလွမ်းနဲ့ သိမ်းရမယ်ဆိုရင်… မောင်ကျောက် ဝဋ်ပါတယ်လို့ပဲ….
လကုန် ခွင့်ပြန်လာရင်… တိုင်ပင်မယ် အကိုမိုက်….
ဦးကျောက် မိစံအပေါ်မှာ မကြင်နာခဲ့လို့ ၀ဋ်ပြန်လည်တာလေ မိုးတွေရွာတဲ့ နေ့တုန်းက ဦးကျောက်က မိစံဆီသွားလိုက်ရမှာ အဲ့လိုဆို ဦးကျောက် ဒီလိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး
အဲသည်တုံးက အသက် ၁၆နှစ် မိစံနဲ့ မတွေ့သေးဘူးကွဲ့…
တွေ့ခဲ့လို့ကတော့… ဟမ် ဒါလည်းမဖြစ်… လုံးဝမဖြစ်…
အူးကျောက်ကလည်းလေ …. ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းက အတော် နုံဒယ်နော် … ညို့ ထဲ တွားရင် ရဲဖမ်းလိမ့်မယ် တိလား .. ။ ဘယ် အမေက တူ့တမီးနား ဂလို ကုလားသေ ကုလားမော အိပ်နေတာမြင်လျှင် ဒေါမကွီးပဲ နေမတုံး ။
စာကျက်လျှင်လည်း ကျက်ပေါ့ ။ အချိန်တန် အိမ်ပြန်ပေါ့အေ ။ဟီးရိုး အလုပ်ကောင်းတာ အချုပ်တွေ ဘာတွေ မရောက်တာ ကံကောင်းတယ်မှတ် ….
ကုလားသေ ကုလားမော ဟုတ်လားး
အဲ့ဇဂါးကို အူးကျောက်အမုန်းဆုံးပဲ ဆိုတာ သိရက်နဲ့ကွယ်.. :harr:
ညည်းကလေ ကိုမတ်ပြောသလိုပဲ ဦးလေးအရှိုက်ကို ဒူးနဲ့လာတိုက်တယ်… ဟင့်
ဟဲ့… ဦးလေးငယ်ငယ်က တကယ့်ကို ငနုံ ငတုံးပါဆို…
အဲသည်ည ရွာတဲ့မိုးက ကမ္ဘာဖျက်မိုး…
ကြောက်နေတဲ့ ချစ်သူကို မထားခဲ့ရက်လို့…
အချုပ်ထဲမရောက်ခဲ့ပေမယ့် ဘဝပျက်အောင် ဖြစ်ခဲ့တာလေ…
ဦးကျောက် နဲ့ တကွ .. သူမဧ။် ..အဲ.. သူဧ။် … သက်ဆိုင်သူရေ …..
ဘာတဲ့ .. ငယ်ကချစ် အနှစ်တရာ … အချစ်ဦးဆိုလျှင် မြေးဦးရတဲ့ အထိ မမေ့ဘူးဆိုလား ဘာလား .. ကြားဖူးတာလေး ရွတ်ကြည့်တာပါ …… ခိခိ
ဟာဂျာ ဦးကျောက်ရာ အတူတူ အိပ်တာမိတာတောင် မိန်းမမရလိုက်ဘူးလား……….
ဘယ်နှယ့်ဗျာ ကံကြမ္မာဂ မျက်နှာသာမပေးဘူးပေါ့နော်…
ဘယ်လိုပဲပြောပြော အခုဒေါ့ စော်ကြည်နေပီမို.လား…… အဲဒီ သူမ ဆိုတဲ့သူကို လိုက်မရှာဘူးလား…
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ယောက်ျားတို့ သိအပ်သောကို ဘာမှမသိဘူးဗျ…
မြန်မာ ဓာတ်ရှင်တွေနှိပ်စက်တာလေ… ထိမိရင် မီးပွင့်တတ်တယ်ဆိုလို့ပါဗျာ…
အင်း… “သူမ” နဲ့ နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းကတော့….
ပို့စ်တစ်ပုဒ် ရေးရင်တောင် ဆုံးပါ့မလား…
မိုးသည်းညမှာ.. ည၁၁နာရီကနေ.. မနက်၂နာရီအထိ… သူတို့၂ယောက်ဘယ်လိုအိပ်နေလိုက်ကြမှန်း… စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး..
ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေး “Twilight” ထဲကလို ရိုးရိုးသားသားအိပ်ခဲ့တာပါ…
မောင်ကျောက်တို့မှာ “အဖော်” ဆိုတာကြီးကို ကြားတောင် မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး…
“ကလင် ကလင်” … “ဟောသည်က ပဲပြုတ်”
ဘယ်ကလာဦးကျောက်ကပြေး.ရမတုန်း ကိုပုရဲ့ 
ကောင်မလေးက ကြောက်ကြောက်နဲ့ ကုတင်ပတ်ပြေးနေမှ
အင်းးးး …. ကိုကျောက်အတွက် တစ်ခုခုတော့ ကြိုတင်စီစဉ်ပေးထားဦးမှ….
သူက အတွေ့အကြုံ နဲတယ် တဲ့ (ယုံကြလား.. )
ဟီးးး အရဂါးစဒါ အူးကျောက်
ဒီတစ်ခါတော့ အဆင်ပြေပါစေ (အတည်)ဆုတောင်းပေးပါတယ်
အားငယ်ပါနဲ့ဗျာ ၄၀ မှဘဝစတာဆိုတော့ အချိန်ရှိပါသေးတယ်
…..သူဘယ်မှာလဲ ..သတိရနေတယ်.. တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ..လွမ်းမိပါတယ် …ဘလာ ဘလာ ဘလာ…
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ..လွမ်းမိပါတယ် ဆိုတာလည်း..
လက်ရှိ… သူလေးက ဘယ်သူဆိုတာတော့….
အဲဒီအချိန်က “အဖြူရောင်”အဖြစ်ကလေးပြန်တွေးတိုင်း.. ကြည်နူးတယ်မဟုတ်လား..။
၁၀မိနစ်နှစ်သိမ့်မှုနဲ့.. တဘ၀ကြည်နူးမှု လဲလိုက်ရတာပေါ့..။ တန်ပါတယ်..။
အဲဒါ… အဲဒါ.. ဘ၀သံသရာ..
လကုန် ခွင့်ပြန်လာရင်… တိုင်ပင်မယ် အကိုမိုက်…တဲ့လား
အလှူအတန်းတွေ မှာတောင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာမို့လား…
ခု ကိုကျောက်ရဲ့အချစ်ရေးလဲ အောင်မြင်သွားအောင်
မန်းလေးဂဇက်ထဲလဲ အမှတ်တရဖစ်သွားတာပေါ့ နော်………….
ဟီ ဟိ အကို ကိုရင်မောင်ပြောမှ…
မိန်းမခိုးဖို့ မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်လာတာ ရှင်လောင်းလှည့်သလိုကြီး…
အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်း အသိပေးပါ့မယ်ဗျာ…
ခိုးပြေးဖို့ကတော့ တစ်ရွာလုံး “ကွိ” မှာမို့… နောက်ဆုံးမှ ရွေးပါရစေ…
ရူးဖို့မလွယ်ဘူး သေဖို့လွယ်တယ်တဲ့ အင်းလိပ်ဇဂါးကြားဖူးတာ..
ဆိုတော့ ရွာထဲမှာ လဗျိုကြီးချင်းတူရင်တောင် ရှေးအကြောင်း နောက်အကြောင်းကင်းတဲ့ လဗျိုသန့်သန့်က အလွန်ရှားတဲ့ခေတ် ဘွပေးကုသိုလ်ကံ မကောင်းလို့ အကြောင်းမသင့်ခဲ့တာကို ညန်တယားနဲ့ မဆင်ခြင်ဘဲ အကုသိုလ်အတုံးအခဲနောက်ကို ခပ်မိုက်မိုက် ထပ်လိုက်ချင်တဲ့ ….. ဒဂါကျောက် သင်မမှတ်ရော့လေလား… အပ်ထကထာမှာ နောက်တကြိမ်ထပ်အသဲကွဲရင် ဘယ်လိုဘချမ်းသာ ပြန်လုပ်ရတယ်လို့ မပါပေဘူး 。。。။ ဒီတော့ကာ ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လို့ နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ထပ်ကမ်းလိမ့်မယ် မမှတ်နဲ့ သူမိုက်တို့ သွားရာလမ်းကို မြန်းချင်တဲ့ တဂါကျောက် နေရစ်တော့。。。 လဟယ်
ရှင်အာဝေနီက (ဦးဘဇင်းမတ်） မာတုဂါမကင်းဝေးရာ တောရ
“တဂါကျောက် နေရစ်တော့。。。 လဟယ်” ဆိုရင်တော့…
အကုသိုလ်အတုံးအခဲ ဒီတစ်ခါ မာတုဂါမလေးက အတော်ဖြူးတယ်ဖျာ့…
တပဲ့တော်တော့ လဗျိုသန့်သန့်ဘွကို အခြေအနေပေးရင်စွန့်လို့…
တောမထွက်ပဲ… မြို့တက်တော့မယ် ကိုယ်တော်…
မိန်းမမရလို့ ဘုန်းကြီးဝတ်ချင် ကိုယ့်ဘာသာ.
ဒါနဲ့ သူ့သွားမပြောနဲ့အုန်း မဆူးက အူးကျောက်အရေးကြိုတွေးပီး..
သင်္ကန်းနှစ်စုံ နေ့ည ခြုံဖို့ လှူမယ်ကြံနေတယ် ဆိုလားပဲ
မောင်ရင်တို့ ခေတ်လိုမဟုတ်ဘူးကွဲ့… ဦးလေးတို့က အဖြူရောင်ချစ်သူတွေပါ…
ဘူနဲ့ စထွက်ခဲ့တာကိုး.. (ဟိ..)
အချစ်စစ်ဟာ…ကြိုခင်းထားတဲ့ ပန်းခင်းမဟုတ်ဘူးလေ… (အလဲ့..)
အချစ်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေရှိတယ်… (မိုက်ဒယ်ကွာ..)
ကံကောင်းမှာပါ လေးကျောက်ရယ်… Fighting!!!
သူကလေးကိုလည်း ဖတ်ခိုင်းလိုက်ဦးမယ်… ဟီ ဟိ
စိုးလွင်လွင်ဆိုထားတဲ့ မိုးတွေရွာတိုင်း မျက်ရည်လည်ဝိုင်း လွမ်းစရာတွေအခါခါဖြစ်ခဲ့ပြီ သီချင်းဆိုရင်း ဖီလင်တက်နေတဲ့ အကိုကြီးတစ်ယောက်ကို မေးမိဖူးတယ်..
ဦးကျောက်လဲ မိုးရွာမှသတိရတာလားလို့ မမေးတော့ဖူးနော်..
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ” မီးမြင့်” တယ်ဆိုရင် ဦးကျောက်ကရေလျှံအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့..
မီးဆိုတာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရေနဲ့ငြှိမ်းရတာဘဲလေ..
တိုက်ဆိုင်တိုင်းတော့ အမှတ်တရ သတိရမိပါတယ်…
ရေကတော့ ဦးကျောက်လည်း လခစားကွဲ့….
သူတပါးကို အစအနောက်တွေနဲ့ ပျော်စေတတ်တဲ့ဦးကျောက်
မန်းဂေဇက်မှာစာရေးကောင်းတဲ့ လူဗျိုကြီးတစ်ယောက် နှလုံးသားအသစ်လေးပြန်မွေးဖွားချိန်မှာ
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ တစ်လုံးတစ်ဝကြီး ပြည့်ပါရစေ… မရွှေပုံ့ ရေ
ဆက်ရန်လေးများမျှော်နေပါသည် ။ ကွန်မန့် များအရမည်သူဖြစ်နိုင်သလဲဟုလည်းကောင်း
ကြိုက်မကြိုက်မသိသဖြင့် မရေးလိုက်ခြင်ဖြစ်ပါသည် ။
ခွင့် ပြုပါက ………
အ ဟဲ… လက်ရှိဇာတ်လမ်းရဲ့ မင်းသမီးက…
မှန်းကြသူများအားလုံး ၁၀၀% မှားကြပါလိမ့်မယ်…လို့
တော်လောက်ပြီနော် ။ တဖြည်းဖြည်း ပွ လာပြီ ။
တော်ကြာ ၊ ကောင်မလေး စိတ်ဆိုး လိမ့်မယ် ။
စေတနာ နှင့် ပြောတာ ။
ချစ်ကံခေတယ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက် အဖို့တစ်သက်လုံး အတွက်တော့ မဖြစ်နိင် ပါ ဘူး ဦးကျောက် ရယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကလည်း အချိန်အခါ အခြေအနေ နဲ့ နေရာဒေသ တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ နေမှာ ပါ။
ဘာပဲ ပြော ပြော ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ကံကောင်းမှာပါ လို့ ဦးကျောက် ရဲ့ စာဖတ် ပိတ်သတ် အနေ နဲ့ အတည်
ပြော ချင် ပါတယ်။
ဦးကျောက်ရဲ့ နောက် ပိုစ့် များကို မျှော် နေ တဲ့………..
ကျွန်တော့မှာ ချစ်လိုက်မိတိုင်း အမြဲလွဲတတ်တာမို့…
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ယုံကြည်စိတ် လျော့မိတယ်ခင်ဗျ…
တကူးတက ရှားရှားပါးပါး ကွန်မန့်ပေးတာကျေးဇူးပါပဲဗျာ…
မနေ့က ဇတ်လမ်းလေးဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ခံစားရလို့ အဟင့် ဘဲ မန့်နိုင်ခဲ့တာမို့ အခု ပြန်လာရတာဗျ
( မင်္ဂလာဆောင်မယ် မင်္ဂလာဆောင်မယ် ဒီတစ်မိုးကုန်ရင်ကွယ်
လူကြီးတွေလည်း ဖိတ်ကြားမယ် ကလေးတွေလည်း ဖိတ်ကြားမယ်
မောင် နဲ့ မ နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရင် တစ်ရွာလုံးဖိတ်ကြားမယ် …….. )
ဒီမနက် မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမတစ်ခု အဖြတ် ကြားခဲ့ရပြီး ကိုကျောက်ပိုစ့်ကို သတိရသွားတယ်လေ၊
အဲလို တစ်ရွာလုံး ဖိတ်မလား ဆရာ ဆရာ ကျောက် ရေ။
ဦးကျောက် ဒီတစ်ခါတော့ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် jacky tun ရယ်…
ဒီတစ်ခါ ကံကောင်းဖို့ ဦးကျောက်လည်း မဝံ့မရဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်…
ဦးကျောက် စာရေးကောင်းလိုက်တာ.. ကွန်မင့်တွေကလည်း တကယ့်အပို့ကောင်းတွေပဲ.. ငယ်ချစ်ပုံပြင်လေးကတော့ ပြန်တွေးရင်ကြည်နူးစရာဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. လက်ရှိကိုတော့ အတွေးပွားသွားပါတယ်.. မင်းသမီးကိုလိုက်ဆက်စပ်တော့လည်း လက်ရှောင်နေသူတွေများတော့ မတွေးတတ်ဖြစ်ရပါတယ်…. All the best…
ငယ်ချစ်ဦး ပုံပြင်က ပြန်စဉ်းစားမိရင် အစပိုင်းမှာ ကြည်နူးစရာ…
အဆုံးသတ်မှာ ကြေကွဲစရာပါ Crystalline ရယ်…
လက်ရှိ မင်းသမီးကိုတော့ သိပ်ပြီးဦးနှောက်မစားပါနဲ့…
ရွာထဲမှာ ဖိတ်စာပို့လိုက်ရင် ဟာ… ကနဲ ဖြစ်သွားကြပါလိမ့်မယ်…
တော်ကြာ ၀ိုင်းစုကို ကျော်တက်သွားတော့မယ်။
ကွန်မန့်နည်းနည်းပဲပေးတတ်တဲ့ ပိတ်သတ်တွေတောင် ဆုတောင်းပေးနေကြပြီနော။
ရွာထဲက အပိုဂျီးတွေ အပိုလေးတွေရေ၊
လက်ရှောင်နေရင် မင်းသမီး ထင်ခံနေရမယ်။
ဒါမှ ဦးကျောက်ရဲ့သူကလေးကို မြန်မြန်သိပြီး တွန်းပို့ပေးနိုင်မှာ။
ဦးကျောက်….လူဆိုးတွေနဲ့ မောင်တိုင်ပင်မလား။(နယ်စည်းမခြားတွေက ရွနေတယ်)
လူကြီးစုံရာနဲ့ ငွေဖလားပိုက်သွားမလား (ရွာလူကြီးတွေလည်း ရွနေတယ်)
” ရွာထဲက အပိုဂျီးတွေ အပိုလေးတွေရေ ၊
လက်ရှောင်နေရင် မင်းသမီး ထင်ခံနေရမယ် ။
မြန်မြန်လာ ကိုယ်ထင်ပြကြ ”
ဟဲ ဟဲ ၊ ဟုတ်ပါ့ ။
နို့မို့ဆို ၊ သူလိုလို ၊ ငါလိုလို နှင့် ။
တစ်ချို့ကတော့ ၊ အထင်ခံရ နဲလား ဆိုပြီး ၊
တမင် အသံတိတ်နေတာလည်း ၊ ပါမပေါ့ ။
” ပိတ်သတ်တွေတောင် ဆုတောင်းပေးနေကြပြီ နော ”
အဘတို့ အားလုံးက ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်ကွယ် ။
” ဦးကျောက်….လူဆိုးတွေနဲ့ မောင် တိုင်ပင်မလား ။
( နယ်စည်း မခြားတွေက ရွနေတယ် )
လူကြီး စုံရာနဲ့ ငွေဖလားပိုက် သွားမလား ။
( ရွာလူကြီးတွေ လည်း ရွနေတယ် )
အင် ၊ အဲဒီလောက်တော့ မလွယ်ဘူး မ ပဒုမ္မာ ရဲ့ ။
အန်တီ ပဒုမ္မာ ရေ…
အဘဖော ပြောတဲ့အတိုင်း အဲဒီလောက် မလွယ်ပါဘူး ခင်ဗျာ…
မင်းသမီးကို ဖွင့်မပြောနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ ခင်ဗျာ…
ကံမပေးလို့ ဝေးကြရင် သူလေးနစ်နာမှာစိုးတာလည်း ပါတာပေါ့ခင်ဗျာ…
ဘူလေးလဲ ဟေ့ xxxx အဲဒါ ဘူလေးလဲ xxxxx
ဦးကျောက်ရေ… သိချင်စိတ်တွေ များနေပီနော်…..
“““စာဖတ်အပြီး မော့ကြည့်လိုက်တဲ့ “သူမ” ရဲ့ အညိုရောင်မျက်ဝန်းတစ်စုံမှာ အရောင်တွေလက် ပါးမို့လေးမှာပန်းဆီရောင်ပြေးနဲ့…
“နင်… ငါ့ကို တကယ်ပေးတာဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ” လို့ ဆိုအပြီး၊ အိကနဲ ငိုအချမှာ… ဟောသည့် မောင်ကျောက် ရူးလိုက်မိတာ လွန်သလားဗျာ….”””
ရေးတာက မိတယ်ဗျာ၊ အဲဒါတွေဖတ်ပြီး စာမရေးရဲ တော့ဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ လေးဘာလေး လုပ်ပါအုံး
မမြှောက်ပါနဲ့ ကို awra-cho ရယ်…
အများတောင်းဆိုကြရင်တော့ မလှတဲ့ဇာတ်သိမ်း ရေးပေးပါ့မယ်…
အမလေး ဦးကျောက်ရယ် တွင်းနက်ကြီးထဲ ခုန်ချဖို့အရေး သူ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေလိုက်တာ မပြောချင်ဘူး
ကျမကတော့ တွင်းနက်ထဲ မထင်မှတ်ပဲ ပြုတ်ကျသွားတာ ခုလာမဲ့ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ တလ တင်းတင်း ပြည့်ပါ့မယ်။
တကယ်တမ်းကျ ဘ၀ကြီး အဆုံးသတ်သွားတာပါ ဦးကျောက်ရယ် အပျော်ဆိုတာ ခဏပါ
ကိုယ်တောင် မလွန်ဆန်ဝံ့လို့ နားအေး ပြီးရော ခုန်ချလိုက်ရတာပါ။ ကိုယ့်အလိုသာဆို ငှက်ပျောတုံးဖက်ပြီး သေဖို့ စဉ်းစားထားပြီးသားပါ။
ကြွားကောင်းတဲ့ အကြောင်းလည်း မဟုတ်တော့ ဒီလိုပဲ ရောယောင်ပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ်နေမို့ဟာ ဒီရွာက တဆိတ်ရှိ single တွေကိုပဲ ခလုတ်တိုက်ပြီး ထင်တလုံးနဲ့ လျှောက်ပြောကြလွန်းလို့ ခုတော့ ဖွင့်ပြောလိုက်ပါပြီ။
လက်ဖွဲ့လည်း လက်မခံ မင်္ဂလာလည်း မဆောင် နားအေး ပါးအေး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာမို့ အရင်းနှီးဆုံးတွေလောက်ပဲ သိလိုက်တယ်။
တီချယ့်ကိုတောင် ရေကန်တော့သွားမှ အကျိုးကြောင်းဖွင့်ပြောမလို့ စဉ်းစားထားတာ ဘယ်က စပြောရမှန်းမသိလို့ ရုတ်တရက်ကြိးဆိုတော့လေ။
ရှေ့လျှောက် မတော်သိသွားရင် အမှုကြီးနေမှာစိုးလို့ ဖွင့်ပြောလိုက်ပါပြီ ရှင်
ကျမက ပါစင်နယ်ကို လူသိတာ သိပ်မကြိုက်တာမို့ပါ နားအေး ပါးအေး နေချင်တာလည်း ပါတယ်။
ထပ်မေးရင်လည်းဖြေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘ၀ပြောင်းသွားတာကို အသိပေးရုံလောက်ပါပဲ ။
ဝေးးးး ဟေးးး ဟေးးးး
Big big congratulations!!! မမပူးခ်ျ
မမယ်ပု တို့များ ပိရိချက်။ ငှက်ပျောပင်ခုတ် ချောက်ထဲခုန်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စ သိတောင် မသိလိုက်ရ
ဒမယ် ဂျေပီဂျီးရဲ့ …သမိုင်းပေးတာဝန်က မကျေသေးပါဘူး..
ခုမှ တာဝန်စ ထမ်းဆောင်ဖို့ ..ရီဂျစ်စတာလုပ်တဲ့အဆင့် ရှိသေးတာ..။
သမိုင်းပေးတာဝန်ကျေဖို့ ဆို အဆိပ်မိဖို့ ဖျဉ်းစွဲဖို့ အဆင့်တွေ ဖြတ်သန်းရဦးမယ်မဟုတ်လား..
မီးပုံးပျံ မမယ်ပု ဖြစ်မယ့် သဒင်းကောင်းလေး စောင့်မျှော်နေပါတယ်…။
ကိုရင်တိုက်ကတော့ ဂျီတော့ စတေးတပ်စ်မှာ ဟဲဟဲ ..ငါကွ တဲ့ …
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘားမန်..
ဘာဖြစ်ဖြစ် ရီဂျစ်စတာလုပ်တယ်ဆိုကတည်းက ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများသေချာနေပြီပဲကို ..
သူကျတော့ သူများလို ငါကွ!! အော်ဖို့နေနေသာသာ
အာဝူးးးးး တဲ့ .. ခွိခွိ
မယ် pooch ရေ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း အကြီးကြီးပါ…
မန်းကိုလာဖို့ အစီအစဉ်ရှိလို့ လက်ဖွဲ့ကတော့ လက်မခံရင် ကိုပေါက်ဆီမှာ ထားခဲ့မှာ…
သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားမိတော့… တောက်စ် ဦးကျောက်ကို ကြောသွားတာ…
ဂုဏ်ယူပါတယ်အေ… မောင်ဂီပြောသလိုလေး… မြန်မြန်ဗျို့…
ကြွက်မိနေ.. အဲ.. ယောင်လို့.. လူမိနေပါတယ်ဗျို့…
ဦးကျောက်တို့.. တော်ချက်.. တခါတည်း.. မီးပြတိုက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်..။…
ပုရ်ှမမကို.. သမိုင်းပေးတာဝန်ကျေသူအဖြစ်.. အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း..။
ချောက်ထဲက.. ပြန်မတက်ပဲ.. အောက်ကစမ်းချောင်းလေးမှာ.. ဖားငါးရှာစားစေလိုကြောင်း..။
ကြွက်ထောင်ကြောင်မိ လို့ဘဲ ကြားဖူးပါတယ် ။။
ခုတော့ ကျောက်ထောင်တာ ပုခ်ျ မိသွားပါရောလား ….
ဦးကြောင် စာရင်းထဲ တစ်ယောက်တော့ ခရောစ်ဖြစ်သွားဘီပေါ့ ..
စကား အတင်းစပ် .. ဦးကျောက် လူယောင်ပြထားတာ ရာထူး မတိုးပေးသေးဘူးလား သူကြီး..
မီးမြင့်တဲ့ ယောက္ခမလောင်းကြီး ကျသွားအောင် .. အဟိ.
စာပေဆုပေးပွဲမှာ ကိုယ်ယောင်ပြထားပြီး ရာထူး မတိုးသေးတဲ့ သူတွေ သူကြီးကို စန်ဒ ပြခိုင်းမှနဲ့ တူတယ် ..ခွိခွိ
မယ်ပုခ်ျက စိတ်မြန်လက်မြန် မခံချင်စိတ်နဲ့ ထုတ်ပြောသွားတာဖြစ်မယ်… မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာ… ယုံထောင် မယ်ပုခ်ျမိ… ဟီ ဟိ…
အ ဟမ်း… လူလုံးပြရင် ရာထူးတိုးပေးမယ်ဆိုလို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ခံပြီးပြန်လာတာ… အခုတော့ အားလုံးဖရီးတောင်လုပ်လိုက်လို့ ဟိုရက်က ရွာထဲမှာ မီးကင်းသံချောင်းခေါက်လိုက်ရသေးတယ်…
တော်ဘီ တဂျီး… ပြန်လျော်ပေး…
တော်ပါသေးရဲ့ .. ရွာထဲ ကြွက် မရှိလို့ .. ရီချင်ပြီး ရေးလိုက်တာ ..စိတ်ထဲ က ယုန် က ကြွက်ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်မိတယ် ..
အမှန်တော့ နန်းမတော်လည်း ဘယ်လို ကြေညာရပါ့ မလဲ အကွက်ချောင်းနေတာ နေမှာ .. အခုမှ ဦးကျောက်ကျေးဇူးနဲ့ အခွင့် ရသွားတာ နေမှာ … :hee:
Congratulation ပါ pooch ရေ ..
ဆိုတော့ မှတ်မိသလောက် မှတ်တမ်းတင်ရရင် ဒီဝါကျွတ်မှာ ရွာသူားတွေထဲ က
တို့ တော့ တွင်းနက်ကြီး ထဲ ခုန်ချပြီးသွားကြောင်းနဲ့
သတင်းမပို့ ရသေးသူများ ဦးကျောက်တို့ အမတ်မင်းတို့ သားရည်ကျအောင် သတင်း အမြန်ပို့ကြပါ ။ ကိုရှုံးတစ်ယောက်လဲ ချိန်တော့ချိန် နေတာဘဲ .. အခုတော့ သတင်း မကြားပြန်ပါဘူး … အဟဲ ..
သဂျီးသာမီး ချာတူးလန် ကျန်သေးကြောင်း ထပ်ဖြည့်ခဲ့ပါသဗျို့.
သီဟပူရ က ဟိုတယောက်ကလည်း. ကျော်တို့၂ယောက်ကို အဖေအရွယ် သားအရွယ်ဆိုပြီး.
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကကျွန်းနဲ့ အရှေ့ကျွန်းကို ငြင်းပယ်ပြီးသကာလ
သီဟဒီပမှာပဲ အခြေချတော့မှာရယ်လို့ ကြားရပါဂျောင်းးး
ရှေ့လဆန်း ရွာမှာကျုပ်တို့ ဆုံကြရင်ဖြင့် သီဟပူရကျွန်းသူဂျီးကို တမ်းလို့…
ကျုပ်တို့ ကျွန်းသားနှစ်ယောက်က လွမ်းလွမ်းနဲ့ ကွဲကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း…
Ma Ma Pooch,
ဟိုဘက်က ဥကြောင်ကြီး ပို့ စ်နဲ့ ပေါင်းဖတ်မှပဲ
အတော်ဆိုးတဲ့ကြောင်… သူ့စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီး… ကျုပ်ကို လွတ်လွတ်ကြီး ဆော်သွားတယ်…
ကိုကိုကျောက် က ကြောက်
ချော့ကာမှချော့ရရော… ထုတ်ပြောဖို့ မဖြစ်သေးလို့ပါ အကိုပေါက်ရယ်…
ရွာသူ pooch လေးရေ….
ခုလို ကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်…
ရာသက်ပန် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း
မယ်ပုတစ်ယောက်တော့ အော်မေ့ဂိုဏ်းကို သစ္စာဖောက်သွားပါပကောလား။